Guddiga doorashooyinka iyo Jaaliyadda Soomaalida Kenya oo Nairobi ku kulmay – Xeernews24
Guddiga doorashooyinka iyo Jaaliyadda Soomaalida Kenya oo Nairobi ku kulmay
Kullanka oo ahaa is xog wareysi iyo su’aalo weydiin, ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas’uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, siyaasiyiin, waxgarad, haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Danjire ku xigeenka Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, ahna qunsulka koowaad ee Safaaradda mudane Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan, oo kullanka furay ayaa sheegay in ay ku faraxsanyihiin iney is hor fariistaan Jaaliyadda, isla markaana ay soo dhawaynayaan afkaartooda.
“Ka safaarad ahaan waa soo dhoweyneynaa kullankaan, runtii shaqo wanaagsan ayay hayaan guddiga hirgellinta doorashooyinka dadban, halkaan Nairobi waa meelaha ugu badan oo ay dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin, loona baahanahay in jaaliyaddu ogaadaan halka ay wax marinayaan guddiga” ayuu yiri mudane Maxamed Amiin.
Guddoomiyaha guddiga hirgellinta doorashooyinka dadban, mudane Cumar Maxamed Cabdulle (Cumar Dhageey) ayaa ka sheekeeyay qeybaha isla wadi doona doorashooyinka dalka, isagoo hoosta ka xariiqay in shaqada ugu badan ay qaban doonaan guddiga hirgellinta doorashooyinka dadban ee dalka, guddiga xallinta khilaafaadka, goob joogayaal caalami ah iyo bahda warbaahinta.
Wuxuu intaa raaciyay Guddoomiye Cumar Dhageey,in ay jiri doonto Geeddi socod ka billaabanaya xullista Ergooyinka, illaa laga gaaro doorashada madaxda qaranka ee dalka.
“Doorashada dalka waxaa loo marayaa nidaam caalami ah, waxaa doorka ugu muhiimsan qaadan doona guddiga hirgellinta doorashooyinka dadban, guddiga xalinta khilaafaadka, goob joogayaal caalami ah iyo bahda saxaafadda, sidoo kale musharrax ma aha qof walba oo hadda ku dhowaaqay musharaxnimadiisa ilaa ay buuxiyaan shuruudaha loo diyaariyay musharraxiinta, waana in ay soo maraan guddiga hirgellinta doorashooyinka dadban” ayuu yiri Guddoomiye Cumar Dhageey.
Ugu dambeyn jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa su’aalo la xiriira habka doorashada ee dalka weydiiyay guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya, iyagoo si faahfaahsan uga jawaabay dhammaan waxyaabihii la weydiiyay
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/09/Guddi7-640x427.jpg 427 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-09-15 09:58:462016-09-15 09:58:46Guddiga doorashooyinka iyo Jaaliyadda Soomaalida Kenya oo Nairobi ku kulmay
Qorshe Saddex Geesood Ah Oo Maraykanka,Yuhuuda,Iyo Sucuudigu Geeska Africa ... Duqay reer Waqooyi ah oo Muqdisho Quus ka jooga